माटोको भाँडामा पकाएको खाना स्वास्थ्यको लागि कति उत्तम ? | News Polar
माटोको भाँडामा पकाएको खाना स्वास्थ्यको लागि कति उत्तम ?
काठमाडौं । माटोको भाँडामा खाना पकाउने पुरानो चलन हो । तर आधुनिक बन्ने नाममा यसको मजाक बनाउने र गरिबीको प्रतिक मान्ने गर्दा यो चलन लोप नै भइसकेको छ । आदिम समयका उपलब्धिहरुलाई गलत ठान्ने प्रवृत्तिले गर्दा अहिले माटोको भाँडो पूजापाठमा मात्रै प्रयोग हुने अवस्था आएको छ । तर माटोको भाँडामा खाना पाकाएर खाँदा अनेक फाइदा हुने विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको छ ।
त्यसो त स्टिल वा अन्य धातुको भाँडा आगोको रापले छिट्टै तात्ने र खानामा भएको पोषकतत्व नष्ट गर्ने गर्छ । त्यसको तुलनामा माटोको भाँडा निक्कै कम तात्ने र बिस्तारै पाक्ने हुँदा खानाको पोषकतत्व कायम रहन्छ । यस्तै माटाका भाँडामा प्राकृतिक रुपमा नै अल्कलाइन हुने हुँदा यसले ग्यासको समस्या समेत हल गर्ने गर्छ । विशेष गरेर माटोको भाँडामा पकाएको भातले अझ बढी फाइदा पुग्छ ।
यसमा खाना पकाउँदा बहिरबाट छुँदा पोल्ने गरी तातो हुँदैन् । यसले गर्दा चामलमा हुने काब्र्स नजल्ने र शरीरमा इन्सुलिन बनाउन सहयोग गर्ने गर्छ । यसको विपरित स्टिल वा अन्य धातुमा पकाएको खानामा कार्वोहाइड्रेट जलेर साधारण काब्र्स वा स्टार्चमा परिणत गराइदिन्छ । धातु वा चिनियाँ माटोको भाँडामा पकाएको कतिपय खाद्यपदार्थ त विष समान नै हुने गरेका छन् । माटोको भाँडामा पकाएको खाना लगातार केही दिन खाएपछि आफैलाई नै यसको फाइदा बारे महसुस हुन्छ । यसले रोग प्रतिरोधी क्षमता समेत बढाउने गर्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रकाशित : श्रावण ०६, २०७८, १२:११:२५
यस्तो छ १००-मिटर दौड कुद्ने र जित्ने तरिका, जान्नुहोस्
गर्भमा छोराछोरी के हो भनेर कसरी थाहा पाउने ? पढनुहोस्
पाँच भाइको एक्ली श्रीमती